TITAN SOLAR RAHO
Titan Solar Cloud dia manome fitantanana O&M rafitra ho an'ny Tetikasa masoandro mifototra amin'ny teknolojian'ny loT, angona lehibe ary ny informatika rahona.
Ny Titan Solar Cloud dia manangona angon-drakitra feno avy amin'ny tetikasa solar, ao anatin'izany ny angona avy amin'ny inverter, toby meteorolojika, boaty combiner, DC combiner, tady elektrika ary module.
FAMPIHARIAN'NY DATA CONNECTION
Ny Titan Cloud dia afaka mampifandray ireo mpanodina marika isan-karazany amin'ny alàlan'ny fifanarahana fifandraisana amin'ny marika 40 mahery eran'izao tontolo izao.
Ny sehatra Titan Solar Cloud dia mahatsapa ny O&M afovoany, ao anatin'izany ny fitiliana ny fahadisoana intelliqgent, ny fametrahana mandeha ho azy ny fahadisoana ary ny O&M akaiky, sns.
FITANTANANA NY GROUPE SY NY FIASA
Izy io dia afaka mahatsapa ny fitantanana O&M fiaramanidina ho an'ny zavamaniry solar manerana izao tontolo izao, ary mety amin'ny tetikasa solar trano fonenana aorian'ny serivisy varotra.Afaka mandefa ny baikon'ny serivisy amin'ny ekipan'ny serivisy eo akaikin'ny toerana misy hadisoana.
Miorina amin'ny teknolojian'ny Internet, serivisy rahona ary angona lehibe, ny rahona fitantanana angovo RENAC dia manome fanaraha-maso tobim-pamokarana herinaratra, famakafakana angon-drakitra ary O&M ho an'ny rafitra angovo samihafa mba hahazoana ny ROI ambony indrindra.
Ny rahona angovo RENAC dia mahatsapa ny fanangonana angon-drakitra feno, ny fanaraha-maso ny angon-drakitra momba ny orinasa solar, ny rafitra fitahirizana angovo, ny tobin-tsolika, ny fiampangana EV sy ny tetikasan'ny rivotra ary koa ny famakafakana angon-drakitra sy ny fanenjehana.Ho an'ny valan-javaboary indostrialy, manome famakafakana momba ny fanjifana angovo, fitsinjarana angovo, fikorianan'ny angovo ary famakafakana ny fidiram-bolan'ny rafitra.
FAMPANDROSOANA SY FIKAMBANANA
Ity sehatra ity dia mahatsapa ny O&M afovoany, ny diagnostika intelligent faut, ny fametrahana mandeha ho azy faut ary ny fihodinana akaiky.O&M, sns.
Afaka manome fampivoarana asa manokana araka ny tetikasa manokana isika ary mampitombo ny tombony amin'ny fitantanana angovo isan-karazany.